नलागी बिना कुनै स्वाद: प्रयोग र व्याख्या
तपाईं लार बिना खाना खाएर कसरी गर्न सक्नुहुन्न
यहाँ प्रयास गर्नको लागि यहाँ छिटो र सजिलो विज्ञान प्रयोग छ। के तपाईं लाला बिना खाना स्वाद गर्न सक्नुहुन्छ?
सूखी खाना, जस्तै कि कुकीज, पटाखे वा प्रेज्जेल
प्रयोग प्रयास गर्नुहोस्
आफ्नो जिब्रोलाई सुखाओ! Lint-free paper towels एक राम्रो छनौट हो, तर यदि तपाईले तपाइँको शर्ट वा हात वा जे पनि प्रयोग गर्नुहुन्न भने, म तपाईंलाई रोक्न तयार छु।
तपाईंको जिब्रोमा सूखी खानाको नमूना राख्नुहोस्। यदि तपाईसँग धेरै खानेकुराहरू उपलब्ध छन् भने तपाईले राम्रो परिणाम पाउनुहुनेछ र तपाईका आँखा बन्द गर्नुहोला र एक मित्रले तपाईलाई खाना तिर्नु पर्छ। यो किनभने किन तपाईं स्वाद मनोवैज्ञानिक हो। यो तपाईं एक कोला र यो चिया छान्नु भएको छ जस्तो लाग्छ ... स्वाद "बन्द छ" किनभने तपाईंसँग पहिले नै एक आशा छ। दृश्य संकेतहरू हटाउँदा तपाईंको नतिजाहरूमा पूर्वाग्रहबाट बच्न प्रयास गर्नुहोस्।
तपाईंले के स्वाद गर्नुभयो? के तपाईंले केहि पनि स्वाद गर्नुभयो? पानीको एक चोटी लिनुहोस् र पुन: प्रयास गर्नुहोस्, सबै किला-भलाइले यसको जादू काम गर।
बरु, कुल्ला, अन्य प्रकारका खानाहरू दोहोर्याउनुहोस्।
तपाईंको जीभको स्वादमा Chemoreceptors तरल माध्यम को लागि क्रम मा रिसेप्टर अणुहरूमा बाध्य बाँध को लागि। यदि तपाइँसँग तरल छैन भने, तपाईंले परिणामहरू देख्नुहुने छैन। अब, प्राविधिक रूपमा तपाईले यस प्रयोजनको लागि लारा भन्दा बरु पानी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, लवमा एसिलेसेज हुन्छ, एन्जाइम जुन शगर र अन्य कार्बोहाइड्रेटहरूमा कार्य गर्दछ, त्यसैले बिना लार, मिठो र स्टाट्री खानाहरूले तपाइँलाई कस्तो आशा गर्न सक्दछ।
तपाईं विभिन्न स्वादको लागि अलग रिसेप्टरहरू जस्तै मिठाई, नमकीन, खट्टा र काँचो। रिसेप्टरहरू तपाईंको जिब्रोमा भरिएको छ, यद्यपि तपाइँ केहि निश्चित क्षेत्रहरूमा केहि स्वादको लागि बढि संवेदनशीलता देख्न सक्नुहुन्छ। मिठाई पत्ता लगाउने रिसेप्टरहरू तपाईंको जिब्रोको टिपको नजिकै समूहमा छन्, नमक पत्ता लाग्ने स्वादको स्वाद भन्दा बाहिरको खाडी, तपाईंको जिब्रोको छेउमा खसेको स्वाद र रिसेप्टरहरू र जीभको पछाडि नजिकका कटर कलहरू।
यदि तपाइँ मनपर्थ्यो, तपाईले आफ्नो जिब्रोमा खाना राख्नु भएको आधारमा स्वादहरूको साथ प्रयोग। तपाईंको गंधको भावना धेरै स्वादको भावनामा बाँधिएको छ। तपाईं अणुहरू गन्ध गर्न नमिलाई पनि चाहिन्छ। यसैले सूखा खानाहरू यस प्रयोगको लागि रोजिएको थियो। तपाईं गन्ध / स्टोरी स्वाद गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, यसले तपाईंको जिब्रोलाई छोडिदिनु अघि!
केफिनले स्वादलाई असर गर्छ? | मक्खन-स्वादयुक्त पपकर्नबाट स्वास्थ्य जोखिम
Acetone मा Styrofoam को लुगा
कपरबाट कपर एसिटरेट कसरी बनाउने?
तपाईंको ग्रिल प्रयोग गरी ग्लास कसरी बनाउने?
खाद्य चमक पकाउनुहोस्
चांदी क्रिस्टल कसरी विकास गर्ने?
कसरी सीडी माइक्रोवेव (सुरक्षित)
चाय बाट क्याफिन कसरी निकाल्ने?
चमक बर्फ क्षेत्र ट्यूटोरियल
कैसे एक मिश्रण र आयरन र सल्फर देखि एक यौगिक बनाउन को लागी
कैंडीबाट डीएनए मोडेल कसरी बनाउने?
प्रकार्य र व्यवहारको अर्थ
आलस्यताको व्याकरण (व्याकरण)
धेरै अमेरिकी शहरहरु विशाल दैनिक जनसंख्या स्विंग हेर्नुहोस
पारस्परिक ध्यान सिक्न सात कारणहरू
एक कलेज बाथरूम साझेदारी गर्नको लागि नियम
स्टेक्स रिकर्ड्स '10 सबै भन्दा ठूलो हिट्स
सबै बढ्दो सैनिकहरूको बारेमा
Soprano Fächer: कस्तो प्रकारको ओपरेटिक सोप्रोन तपाई हो?
दन्त स्वास्थ्य स्वास्थ्य पत्रहरू
CSU मान्टीय बे जीपीए, एसएटी, र ACT डेटा
दक्षिण अफ्रीकी अपार्टमेन्टको संक्षिप्त इतिहास
आधारभूत टूर्नामेंट पोकर
सल्फर क्यान्सर तालिकामा कहाँ छ?
एक महिलाको डिजाइन 1800
पत्रुसले येशूलाई जान्न अस्वीकार गर्दछ - बाइबल कथा सारांश
रंगीन साबुन बुलबुले कसरी बनाउने
स्वतन्त्र र आन्तरिक चर उदाहरण
अंग्रेजी भाषामा 44 ध्वनि
12 सबै भन्दा ठूलो सब्जिङ गार्डन पसल
कुञ्जीपाटी र टाइपिङ समस्याहरू
3-डिजिट घटावट कार्यपत्रहरू (केही नियमन गर्ने)
अनलाइन विद्यार्थीको रूपमा कसरी सफल हुन्छ?
अमेरिकी क्रांति: न्यूयोर्क, फिलाडेल्फिया, र सरत्त्गा
शीर्ष5बर्स्ट रोमन सम्राटहरू
सन् 1 990अक्टोबर अक्टोबरको संकटको समय